म्याक मिनीमा बिक्री, सम्भावित उपकरण नवीकरण? | म म्याकबाट हुँ
भर्खरका महिनाहरूमा हामीले म्याकको नवीकरणको सम्बन्धमा धेरै समाचार प्राप्त गरेका हुनसक्छौं, यो नविकरण २०१ 2016 को म्याकबुक प्रोबाट शुरू भयो। यसले म्याक प्रोको नवीकरण सम्बन्धी एप्पल नेतृत्वको सूचनासँगै जारी राखेको छ। एक iMac प्रो को संभावना, जो वर्तमान iMac 5k प्रतिस्थापन गर्दछ। यद्यपि हामीसँग म्याकको तल्लो दायराको बारेमा कम जानकारी छ। आजको दिनसम्म म्याकबुक एयरको साथ साथै म्याक मिनीको पनि अज्ञात छैन।
यो राम्रो छ कि एप्पल समय समयमा म्याक मिनी नवीकरण गर्दछ। पहिले, किनभने यो म्याक प्रयास गर्न चाहने सबैको लागि प्रविष्टि टोली हो, र निर्णय गर्नुहोस् कि यसले तिनीहरूलाई विश्वास दिलाउँदछ भने म्याकोसमा काम गर्नुहोस् र अधिक सुविधाहरू भएको टोली रोज्नुहोस्। र दोस्रो, यो म्याक लिन मन पराउनेहरूका लागि उत्तम उपकरण हो तर यसलाई स्क्रिन, किबोर्ड, इत्यादिसँग अनुकूलन गर्न रुचाउँदछ।
आज हामी यस रूपमा चिनिन्छौं ठुलो सतहहरु उनीहरूले मध्य-दायरा म्याक मिनीलाई १ 160० यूरोले कम गरेका छन्, जुन २०% कम छ। यो एक शक्तिशाली टोली हो, जसले धेरै कनेक्टिविटी प्रदान गर्दछ। € 600 भन्दा बढीको लागि हामीसँग २.5 GHz i2,6, G Gb रम र १ Tb HDD सँग म्याक मिनी छ। पछिल्लो टोलीको एकमात्र नकारात्मक पक्ष हो: एप्पलले म्याक मिनी नविकरण गर्न यति लामो समय लिइरहेको छ, जसले अझै एचडीडी माउन्ट गर्दछ। केवल शीर्ष को-दायरा टीम फ्यूजन ड्राइव माउन्ट गर्दछ।
त्यसो भए पनि, eयो हाम्रो दैनिक कार्यालयको कामका लागि वा सम्पूर्ण परिवारको लागि एक मुख्य उपकरणको रूपमा उत्कृष्ट उपकरण हो। यो स्पष्ट छ कि यो केही वर्षको साथको टोली हो, र यसले आंशिक रूपमा मूल्य घटाउनलाई जायज ठहराउँछ। यद्यपि धेरै थोक बिक्रेताहरूले मूल्य घटाउने निर्णय गर्दछन् जब उनीहरूसँग केही प्रकारको उपकरण नवीकरण जानकारी हुन्छ। पछिल्लो, जब डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी को लागी केहि हप्ता बाँकी छ, उनले सोधे कि एप्पलले हामीलाई म्याक मिनीको नवीकरणको साथ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेयसैले म्याक दायरालाई छिट्टै नविकरण गर्ने वाचा जारी राख्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » म्याक मिनीमा बिक्री, सम्भावित उपकरण नवीकरण?
ठीक छ, तिनीहरूले पहिले नै यो अपलोड गरेका छन्, कमी लामो समय सम्म चलिरहेको छैन 🙁
बिजुलीलाई जवाफ दिनुहोस्